दसैं पर्व र यसको महत्व | Butwal Dainik
दसैं पर्व र यसको महत्व
२०७८ आश्विन १७, आईतबार (३ हफ्ता अघि)
दशैं एउटा एस्तो चाड हो जुन कि नेपालबाट सुरु भएको थियो। दशैंलाइ नेपालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाड मध्ये एक मानिन्छ। काठमाडौं उपत्यकाको नेवारहरु मध्ये दशैंलाई मोहनी पनि भनिन्छ र यो नेपाल सम्वाद क्यालेन्डर वर्षको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उत्सवको रूपमा मनाइन्छ। भारतमा एस चाडलै दशेरा भनेर पनि चिनिन्छ। यो चाड प्राय नेपालका हिन्दु र किरात धर्ममा विश्वास राख्ने मानिसहरुले मनाउने गरछन्। दार्जीलिंगको पहाडी, सिक्किम, आसाम र भारतको उत्तर-पूर्वी राज्यहरूका जातीय नेपाली बोल्ने मानिसहरुले पनि यो चाड मनाउदै आएका छन्।
यो विक्रम सम्बद्ध क्यालेन्डरमा सबैभन्दा लामो र महत्त्वपूर्ण चाडपर्व हो जुन नेपालीहरूले मनाउँदछन्। सबै सरकारी कार्यालयहरू, शैक्षिक संस्था र अन्य कार्यालयहरू चाडको अवधिमा बन्द रहन्छन्, यसले यो उत्सव कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ भनेर देखाउँदछ। दशैं पारिवारिक जमघटमा साथै सामुदायिक सम्बन्धको नवीकरणमा जोड दिनको लागि पनि यो महत्त्वपूर्ण रहेको छ। आफ्नो घर वा देशबाट टाढा काम गरिरहेका व्यक्तिहरू परिवार, साथीभाइहरू र आफन्तहरूका साथ यो चाड मनाउन आफ्नै गाउँ जान्छन्।
दशै कहिले र किन मनाइन्छ?
दशैंले खराब माथि राम्रोको जित र देवी दुर्गाको विजयलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ । यो पर्वको पहिलो नौ दिन दुर्गा र महिषासुरको बिभिन्न अभिव्यक्तिको बीचमा भएको युद्धको प्रतीक हो। दसौं दिनमा चाही दुर्गाले महिषासुरलाइ पराजित गर्नुभएको थियो। अरू हिन्दुहरूका लागि यो चाड रावणमा रामको विजयको प्रतीक हो भन्ने कुरा जुन रामायणमा उल्लेख छ। यो चाड प्राय असोज या कार्तिक महिनामा हुँने गर्दाछ।
दशैंमा के के गरिन्छ ? सबै उमेरका मानिसहरूले आकाशमा चंगा उडाएर दशैं मनाउने गर्दाछन्। बाँसको पिङ्ग मनोरञ्जन को एक तरीका को रूपमा देश को धेरै भागहरुमा दशैंको लागि निर्माण गरीएको हुन्छ। पिङ्गहरु त्यो गाउमा बसने मानिसहुरु मिलेरा घाँस, बाँसको डन्डा र काठ, आदिबाट बनायेकोहुनछ। दशैंमा आफु भन्दा ठुलोले सानोलाइ टिका लैदिनुहुनछन् र आशिष् र दक्षिणमा पैसा पनि दिनुहुनछन्। सबै सरकारी कार्यालयहरू, शैक्षिक संस्था र अन्य कार्यालयहरू चाडको अवधिमा बन्द हुन्नाले र आफ्नो घर वा देशबाट टाढा काम गरिरहेका व्यक्तिहरू परिवार, साथीभाइहरू र आफन्तहरूका साथ यो चाड मनाउन आफ्नै गाउँ जान्छन्। चाडको नाममा भए पनि वर्षाको एक दिन परिवारको सबै सदस्यहरु संग भेट गर्न पाईन्छ। साथै, अभिभावकहरूले आफ्ना बच्चाहरूको लागि नयाँ लुगा किन्छन्। मानिसहरुले मिठो र स्वादिष खाने परिकारहरु एस पर्वमा खाने गर्छछन्।
दशैं कति दिनको मनाइन्छ र कुन दिनमा कसको पुजा गर्निछ
नेपालीहरूले प्राय पन्ध्र दिन दशैं उत्सव मनाउँछन्, जसमध्ये सबभन्दा महत्वपूर्ण मितिहरू पहिलो, सातौं, आठौं, नवौं र दशौं हुन्। दशैंको पहिलो दिनलाइ घटस्थापना भनिन्छ र यो दिनले दशैंको सुरुवात पनि जनाउछ किनभने घसथपना पर्वको पहिलो दिनमा पर्दछ। एस दिनमा जमरा पनि रोपिन्छ। तेस्पछि सातौं दिनलाइ चाही फुलपाटी भनिन्छ | परम्परागत रूपमा, यस दिन, शाही कलश, केराको डाँठ, जमारा र रातो कपडाले बाँधिएको उखुलाई गोरखाबाट काठमाडौँमा ल्याउँछन। तेसै गरि आठौं दिनलाइ चाही माहा अस्तमी भनिन्छ र त्यो दिनको मध्यरातमा कुल बाउन्न भैंसीहरु र बाउन्न बाख्राहरुको बलि देवी दुर्गाको लागि बसन्तपुरको हनुमान धोकामा दिइन्छ। अनि नवौंलाइ चाही माहा नवमी भनिन्छ। एस दिनचाही कारीगरहरू, शिल्पकारहरू, व्यापारीहरू र मेकानिकहरूले तिनीहरूको औजार, उपकरण र सवारीसाधनको पूजा तथा सेवा गर्छन् किनभने यो विश्वास गरिन्छ कि यस दिन सवारी साधन पूजा गर्दा दुर्घटनाबाट बच्न को लागी वर्ष को लागी सबै गाडीहरु बाइक, कारहरु देखि ट्रक को लागी पूजा गरीन्छ। दशैको दसै दिनलाई विजय दशमी भनिन्छ। आफुभन्दा ठुला बडाले निधारमा टिक्का, जामारा र आउने वर्षहरूको लागि आफुभन्दा सानोलाइ आशिष् पनि दिनेगर्छन्।
पन्ध्रौं दिनलाइ कोजाग्रत पुर्णिमा भनिन्छ र यो पूर्णिमाको दिन हो। येसले पन्ध्र दिनको दशैं उत्सवको अन्त्य पनि जनाउछ। यस दिन, धन र भाग्यको देवी लक्ष्मी पृथ्वीमा आउनेछन् र रातभरि नसुतेका मानिसहरूलाई आशीर्वाद दिनेछन् । यस दिन पछि हिन्दुहरुको सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण र नेपालका मान्छेहरुले मनाउने सबै भन्दा लामो चाड को अन्त्य हुन्छ।